Ny fampiasana ny emboka manitra ao amin’ny litorijia - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vavaka arahin’asa misondrotra mankany amin’Andriamanitra ny emboka manitra dorana. Manambara ny vavaky ny mpino misondrotra any an-danitra, tandindon’ny fitoerana sy fonenan’Andriamanitra (Sal 141, 1-2). Mampahatsiahy ny vavak’ireo olomasina miakatra eo anatrehan’Andriamanitra, avy amin’ny tanan’ilay Anjely masina nitsangana teo anoloan’ny otely (Apok 8, 1-4). Koa tsy fanasinana velively no antony anembohana mandritra ny fanompoam-pivavahana fanaon’ny Fiangonana katolika tandrefana sy tatsinanana ary oritodoksa. Fa tena vavaka sy fiderana, omban’asa, sy fihetsika, anomezam-boninahitra an’Andriamanitra, italahoana ny famindram-pony. Io no antony sy heviny, na dia tsy azo tsinotsiniavina aza ny fitsaohana, fanoavana, fanajana sy fanolorana hasina, araka ny nataon’ny Majy (Mt 2, 2.11). Misy dikany lalina arak’izany ny emboka atao amin’ny litorijia sy ny fombam-pivavahana. Voadidy ny fampiasana azy fahiny, amin’ny Sorona Masina lehibe. Ny Papa Paoly faha 6, nanavao ny litorijia, no nilaza fa ankasitrahina ny fampiasana azy. Araka ny boky romanina fanaovana ny Sorona Masina, amin’ny ankapobeny dia azo ampiasaina hatrany ny emboka manitra, fa ankasitrahin’ny Fiangonana ny fanaovana izany, na dia tsy voadidy aza.
Ny fanao raha hanemboka: Tsofina rano hatrany aloha ny emboka voaomana mialoha ny hampiasana azy. Miondrika kely mialoha ny hanembohana. Dia toy izany koa rehefa vita ny fanembohana. Ho an’ny Sakiramenta Masina na Eokaristia voahasina dia, paika telo (trois coup) miverina intelo no fanao sy sahaza Azy. Ho an’ny Evanjely, ny hazofijaliana, ny afo vao sy ny jiron’ny Paka kosa dia, paika telo miverina indroa no fanao. Ho an’ny eveka, pretra mitarika na miara-manolotra ny Sorona Masina sy ny vahoaka kosa dia, pai-droa miverina in-telo no fanao. Ny sary masina sisa rehetra kosa dia pai-droa miverina in-droa na pai-droa tokana ihany no mahazatra sy saika fanao matetika.
Azo atao tsotsotra kokoa raha manahirana izany fa, eo ny torolalana ho an’ny fombam-pivavahana tarihin’ny eveka: embohina intelo ny Sakramenta Masina, ny sisan’ny Hazofijalian’ny Tompo izay misy voatahiry ao Roma, ny sarin’ny Tompo aseho amim-pomba manetriketrika, ny tolotra, ny hazofijaliana eo amin’ny otely, ny boky Evanjely, ny jiron’ny Paka, ny eveka sy ny pretra, ireo manam-pahefana sivily, ny antokom-pihira, ny vahoaka, ny vatana mangatsiakan’ny maty. Ny sisan-taolan’ny olomasina sy maritiry na ny sariny kosa dia embohina in-droa ihany, ary eo am-panombohan’ny Sorona Masina ihany no azo anaovana izany.
Amin’ny fiantombohan’ny Sorona Masina: Omanina mialoha, ao amin’ny Sakiristia na toerana hafa, ny fanembohana sy ny emboka hampiasaina. Rehefa vita ny fiondrehana kely na fanajana atao amin’ny fomba hafa, dia embohin’ny pretra aloha ny otely ary dia orohany. Ny fomba fanembohana ny otely dia atao mihodidina, mihodina miankavanana raha azo hodidinina izy, raha tsy azo kosa dia ny ilany ankavanana aloha no embohina, izay vao ny ankavia. Tsy maintsy embohina manokana ny hazofijaliana, mialoha na mandritra ny fanembohana, araka ny toerana misy azy. Toy izany koa ny jiron’ny Paka, araka ny toro-marika tery aloha.
Amin’ny fanolorana: Mila fahaizana manokana ny fanembohana ny tolotra arak’izay efa fanao ifandovana. Rehefa voaomana ny mofo sy divay, dia embohin’ny Pretra izany, ka toy izao ny fomba tokony arahina: soritana lakroa intelo amin’ny emboka eo ambony (1,3,5: mitsangana; 2,4,6: mitsivalana), avy eo dia faritana boribory (7,8,9), araka ny hita eto amin’ny sary.
Vita izany, dia embohina manodidina ny otely. Tandremana tsara mba hiakatra sy hidina ny fihetsiky ny tanana, iray ambony, iray ambany, mandrapahavitany, saingy tafiditra ao anatin’izany koa anefa ny fotoana anembohana ny Hazofijaliana sy ny Jiron’ny Paka. Aorian’izany vao ataony ny lavabo (fanasan-tanana).
Amin’ny fankamasinana: Adidin’ireo Mpiserivy sy ny Diakra ny mihevitra ny fanembohana ny Eokaristia voahasina sy asandratra mandritra ny fankamasinana. Ary arahina tsara ny toromarika voalaza ery aloha sy aoriana kely.
Ireo fotoana hafa ampiasana azy: Miasa ny fanembohana mandritra ny fidirana ao am-piangonana: embohina ny Alitara. Eo koa ny fihobiana ny Evanjely, mialoha ny hamakiana azy. Ny fanolorana no anembohana ny tolotra, otely, pretra sy vahoaka. Miasa izany mandritra ny fankamasinana, amin’ny fanandratana ny hostia sy ny kalisy. Marihina manokana kosa fa tokony hiasa ny fanembohana amin’ny fombam-pivavahana na Sorona Masina fanaovam-beloma ny maty, fitsaohana ny Sakramenta Masina, diabe am-bavaka (procession) fankalazana ny nanolorana ny Tompo (Jiro masina), alahadin’ny Sampan-kazo, fetin’ny Vatana aman-dRa masin’ny Tompo, Sorona Masina anamasinana manokana ireo Menaka masina, Alakamisy Masina hariva, Zoma Masina, Fiaretan-torin’ny Paka, fitokanana fiangonana sy otely, ary ny famangiana pasitoraly ataon’ny arseveka.
Fanamarihana hafa: Raha ny eveka no mitarika, dia izy no mitso-drano ny emboka mialoha ny hampiasana azy. Esorin’ny eveka ny mitra mialoha ny hanembohany. Tsy tokony hihoatra ny fatran’ny emboka manitra ny zavatra hafa atao fangarony. Tokony handohalika izay rehetra manemboka ny Sakiramenta Masina. Raha misy eveka hafa tsy miara-manolotra ny Sorona Masina eo, dia izy no embohina aorian’ireo Pretra, raha manatrika eo noho ny andraikiny manokana ny filoham-pirenena dia izy no embohina mialoha ny vahoaka. Ny dinti-kazo mani-pofona atao hoe: “ramy” sy “arakaria” na “arokaria” no aoka hampiasaintsika eto Madagasikara, fa tsy tokony ho ny dinti-kesika; na farafaharatsiny, ny vovok’ilay hodi-kazo atao hoe: “kisenasena”, maro azy eny an-tsena.